Ururka Indhoolayaasha Muqdisho oo Ka Hadlay Dareenkooda Ku Aadan Dowladda Cusub | KEYDMEDIA ONLINE
Ururka Indhoolayaasha Muqdisho oo Ka Hadlay Dareenkooda Ku Aadan Dowladda Cusub
Muqdisho (KON)- Waxaa isa soo taraya hambalya farxadeed ee ka kala imaaneysa dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay dunida ka joogaan taasoo ku aadan Dowladda cusub ee Jamhuuriyada Soomaaliya.
Dadku waxaa ay kuu sheegayaan marka aad si hoose ula sheekeysato in Dowladda ay wax badan kaga badalnaan doonto Dowladihii ka horeeyay eyna wax qabada wanaagsan la imaan doonto.
Hadaba xafiiska Keydmedia ee magaalada Muqdisho waxaa soo booqday masuulyiinta Ururka Indhoolayaashe ee magaalada Muqdisho kuwaasoo dareenkooda ku aadan Dowladda cusub ka dhiibtay.
Ismaaciil Maxamed Cadow Afhayeenka Ururka Indhoolayaasha Muqdisho waxaa uu marka hore ka hadlay inay aad u soo dhaweynayaan Dowladda cusub ee Madaxweyne Xassan Sheekh Maxamuud, isagoona Dowladda u gudbiyay hambalyo iyo salaan uu ka wado dadka Indhoolayaasha ah ee ku nool magaalada Muqdisho.
Intaasi akadib waxaa ay baaq iyo codsi u jeediyeen Madaxweynaha cusub ee Somaaliya Prff. Xasan Sheekh Maxamuud kaasoo ku aadan in Dowladda cusub ay si gaar ah u daryeesho dadka camoolaha ah ee ku dhibaateysan magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka kuwaasoo aysan hjirin hay'ado si gaar ah y daryeello.
Dadka camoolaha ah ee ku nool caasimada Muqdisho iyo guud ahaan dalka ayaa kamid dadka ay sida gaarka ah u saameeyeen colaadihii muddada 22- sano ka socday Soomaaliya.